သက်သေအထောက် အထားတွေ နဲ့ ချပြ လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ဟန်ငြိမ်းဦး ဆိုတဲ့ အကောင့် တုရဲ့ နောက်ကွယ်က သရုပ် အမှန်ကို …. – Shwe Naung
သက်သေအထောက် အထားတွေ နဲ့ ချပြ လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ဟန်ငြိမ်းဦး ဆိုတဲ့ အကောင့် တုရဲ့ နောက်ကွယ်က သရုပ် အမှန်ကို ….
N N | June 10, 2021 | Celebrity | No Comments
ဖေ့စ်ဘုတ် နာမည်က ဟန်ငြိမ်းဦး နာမည်ရင်းက စိုးနိုင် အသက်က ၃၆နှစ်ေမွးနေ့ က ၃.၁.၁၉၈၅ (အသက်၂၈ဆိုတာ လိမ်ထားတာ။မှတ်ပုံတင်၊ပက်စ်ပိုစ့် တွေကအစ မကြာခင် အခြားအကောင့် တွေက တက်လာမယ်။ ပေးထားပြီ။ )
ကားနံပါတ် 1M 6136 Honda Insight အဖြူ (၁၂လပိုင်း၂၆ရက်နေ့က ဆယ်လီ တစ်ယောက်ဆီက ငွေညှစ် လို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ ဝယ်ထားတာ၊ အမည် ပေါက်မဟုတ်)
ထင်ရှားတဲ့ အမှတ် အသား မေးစေ့မှာ စောင်မွှေး နှစ်ပင်ပေါက် နေတဲ့ မှဲ့အပြားရှိ။ ထိပ်ပြောင်နေ လို့ မန္တလေးမှာ ဆံပင်တု သွားလုပ်ရင်း တစ်သိန်းခွဲတန် အပေါစား ပါးချိုင့် အတုပါ တပ်လာ။
ဆံပင်တုစွပ် ရင်စွပ်။ မစွပ်ရင် ဦးထုပ် အမြဲ စောင်းထားတယ်။ ခြေထောက် တစ်ဖက် ဆာနေတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင် ပုံမှန် မဟုတ်ဘူး။ နေတာက နေပြည်တော်မှာ။ အလုပ်အကိုင်က ရေသန့် ရောင်းတယ်။
အစ်ကိုလုပ် တဲ့သူက အုတ်ရောင်းတယ်။ ပညာ အရည်အချင်း ၈ တန်းအောင်။ပြည်ပ ကဆိုတာ လိမ်ထားတာ။ ပြည်ပကသူကို Admin ပေးပြီး Live လွှင့်ခိုင်းတာ ဘာညာတွေ တရားစွဲ ခံရခါနီးတိုင်း လုပ်လေ့ ရှိတယ်။
ပြည်ပဆိုရင် ထိုင်းတောင် ရောက်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။ ပက်ပိုစ့် တောင် ၂၀၁၉ မှ လုပ်ရ ကောင်းမှန်း သိတဲ့ကောင်။ မိန်းမရှိတယ်။ ဦးဟန် ဦးဟန်ဆိုပြီ ဆော် တွေဆီက ပတ်ခြူတယ်။
ဆယ်လီ သတင်းတွေကို အတွင်းလူတွေ ပေးလို့ရတာ။ အနုပညာ လောကကလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဟက်ကာ လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဟက်လည်း မဟက်တတ်ဘူး။ ဘာမှလည်း မလုပ် တတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံ လိုလာရင် အချို့ နာမည် မကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆီ တင်လိုက် ရမလား
ဖွလိုက်ရမလား ငွေညှစ် တတ်တဲ့ စောက်ကျင့်ရှိတယ်။ စစ်သားလည်း မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ အာဏာသိမ်းရင် တရားမစွဲရဲ ကြအောင် စစ်တပ်ကို ဖားယားပြီး ဘောမတာ။
အာဏာ သိမ်းတာ သူ့အကြိုက်မို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရပြီး အရမ်း ပျော်တယ်တဲ့။ စစ်တပ်ကို ဘောမတော့ စစ်တပ်က ဟာတွေက ဒီ့ကောင့်ကို ဘာသာရေး လူမျိုးရေးမှိုင်းတွေ၊ သတင်း အတုတွေ တင်ခိုင်းတယ်။
ဒီကောင်က လည်း သူ့ကို Cover ပေးအောင် အဆဲခံ ရမှန်း သိလျက်နဲ့ တင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပွဲထဲကို မတ်မတ်ပန် ဝင်ပါ ရတော့သတဲ့ကွယ်။ အာဏာ သိမ်းကာလမှာ ဘယ်သူ ကမှ တရားမစွဲပါဘူး။ တရားစွဲရင် ကြာလို့။
ဟန်ငြိမ်းဦးကြောင့် အရှက်ကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကလည်း လက်ပိုက် ကြည့်မ နေသလို ဒန်ပေါက် ကျွေးမယ့် အလှူရှင်တွေကလည်း နေ့လယ် ကတည်းက Info တွေ ပေးထား ပြီးတာမို့ နေပြည်တော်မှာ မြေလှန် နေကြပြီ။
ဒီဘဲက ငကြောက်။ သင်းသင်း တရားစွဲတုန်းက မအိပ်နိုင် မစားနိုင်တွေ ဖြစ်အောင် ကြောက်ခဲ့တာ။ အခု ဘယ်လောက် ကြောက်နေမလဲ မတွေးရဲဘူး။ ကျွတ်.. ကျွတ်… ကျွတ်ငဟန်ရေ နင့်ဖာသာ ဆယ်လီ အပုတ်အစပ်တွေ ဖွတာ ငါ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။
စိတ်လည်း မဝင်စားဘူး။ တိုင်မှတ် လို့လည်း နှပ်မသုပ်ဘူး။ အဖက်မတန်လို့ စောက်ဖက် လည်း မလုပ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်ပြီး အာဏာသိမ်းတာ ခေါင်းဆောင် ပိုင်းလေးပဲပြောင်းတာ၊
အရင်လို ပဲဆိုတာ အာမခံပါတယ်တို့၊ GZ တွေက ဖောက်ခွဲ သတ်ဖြတ်တယ်တို့၊ ဆရာဇော်ဝေစိုးတို့ ဖမ်းမိပြီတို့၊ Deep Fake Video တွေ တင်တာတို့ကျ မတရား ဖင်ယားလွန်းရာ ကျသွားပြီ။
ဒီပေ့ချ်တွေ မရှိ တော့ရင် နင်ဟာ ရေသန့်ရောင်းတဲ့ ၈ တန်းအောင် ကောင်ပဲ ဆိုတာ မမေ့နဲ့။ ဒီပေ့ချ်တွေ အတွက်လည်း ဘုရားတရားသာ တထား။ ငါတို့က မီးကျိုး မောင်းပျက် Report ပဲ ထုတတ်တဲ့ အစားတွေ မဟုတ်ဘူး။
ပြည်ပက တစ်ယောက်ကို Admin ပေးပြီး သားက ပြည်ပမှာ တွေဘာတွေ မူလကျီလုပ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့။ နင့်ရဲ့ စောက် တင်းစောက်ဖျင်းပဲ ဖွတတ်တဲ့ ဦးနှောက် သေးသေးလေးနဲ့ ထပ်ဇောင်း ထလာရင် ငါ့မှာ နောက်ထပ် အကွက်တွေ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့။ ငါ ဒီအထိ သိထားရင် ဘယ်အထိ သိနေ မယ်ဆိုတာ မမေ့လိုက်နဲ့ သားရီး။
မှတ်ပုံတင်တွေ၊ ပက်ပိုစ့်တွေက အစ မကြာခင် အခြားအကောင့်တွေက တက်လာ လိမ့်မယ်။ ပေါက်သမျှ Info တိုင်း ငါ့လက် ကထွက်လာတယ်ဆိုတာ မှတ်ထား။ ကဲ… ပရိုဖိုင်က ထိုင်းမော်ဒယ် ပုံကြည့်ပြီး ဦးဟန် ဦးဟန်ဆိုပြီး ဖီးလ်တက် နေတဲ့ဟာမတွေ
နင့်တို့ဦးဟန်ရဲ့ စွခွက်ကို ကြည့်ပြီး သွေးတက် လိုက်ကြပါဦး။ မကြာခင် ပြင်ပက နင့်ဘဝကို တွေးရင်း စိတ်တောင် မကောင်းဘူး။အို… စိတ်မကောင်း လိုက်တာရှင်။ဗက်ဟက်ဟက် ” လို့ရေးသားထား တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ဖတ်ရှု့တဲ့ ပရိတ်သက်ကြီးရဲ့ အမြင်ကိုလည်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်…
source .အိပန္ဆယ္လုိ fb
ကားပေါ်မှာ ဗီဒီယို လေးရိုက်ပြီး တုန်ခါနေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်ရင်း စကားတွေပြောနေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
Mဆိုင်းလုရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယို….
သဇင်ဦးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ….
လုံခြံုမှု ရှိတဲ့နေရာမှာ ရှိနေကြောင်း Stylist တစ်ဦးမှ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒေါင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်…..
လက်မနှေးအောင် ကူညီချင်ပင်မဲ့ အကူအညီတောင်းခံကြ သူအရမ်းများပြီး ပြန်လည်မကူညီ နိုင်တာကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ စူးရှထက်….
သူမရဲ့ အကျ ရောင်းရငွေနဲ့ ဆေးဝါးများ ကို စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေ အတွက် လှူဒါန်းပေးသွားမယ့် အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်….
စျေးရောင်းနေတာ ONLINE မှာ ဘယ်အချိန်ထိစျေး ရောင်းနေတုန်းမှာ လည်း လို့မေးလာတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်….
အထင်သားပေါ်လွင်နေတဲ့ရွှေရင်အစုံလေးတွေ ချပြလာတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..
အဆင့်မြင့်ရေ ကူးကန်ထဲမှာ အပြတ်ကို အလှတရားတွေဖော်ပြ ပြီး ရင်ဖို သွားစေ လောက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ခင်အင်ကြင်းကျော်…..
လက်ဆွဲ အိတ်ကလေးကိုယ် လွယ်ပြီးဖက်ရှင်အလန်း စားပို့စ်လေးတွေနဲ့ ရေကူး ကန်ထဲက မိလွန်းနေ တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး ရဲ့ ဗီဒီယို….